स्वास्थ्य पेजकिन हुन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर ? ( भिडियो सहित ) - स्वास्थ्य पेज किन हुन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर ? ( भिडियो सहित ) - स्वास्थ्य पेज
१७ असार २०७९, शुक्रबार। 2022/07/01
किन हुन्छ पाठेघरको मुखको क्यान्सर ? ( भिडियो सहित )
९ पुष २०७८, शुक्रबार
विश्वमा देखिएका महिलामा हुने क्यान्सर रोगमध्ये पाठेघरको मुख गर्भाशय को क्यान्सर प्रमुख रहेको छ । पाठेघरको मुखमा असामान्य परिवर्तन हुन गई त्यहाँ रहेका कोष–कोषिकामा अनावश्यक, असमान्य र अनियन्त्रित रूपले वृद्धि भएका गिर्खा वा घाउलाई पाठेघर मुखको क्यान्सर भनिन्छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर (सर्भाइकल क्यान्सर ) बारे नेपालमा धेरै महिलालाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसैले, रोग लागेको तेश्रो वा चौथो स्टेजमा मात्र महिलाहरु पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धि समस्या लिएर चिकित्सकहरुका पुग्ने गर्छन् । जसका कारण उक्त रोगको उपचार गर्न चिकित्सकलाई निकै कठिन हुने गर्छ ।
जबकी समयमै जानकारी भएको अवस्थामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर निको हुन्छ ।
कसरी हुन्छ संक्रमण
धेरै जनासँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेमा
सानै उमेरमा बिवाह भएमा वा सानै उमेरदेखि यौनजन्य क्रियामा सहभागी भएमा
सानै उमेरमा बच्चा जन्माएमा
धेरै बच्चा जन्माएमा
पटक पटक गर्भपतन गराएमा
यौन सम्पर्क गर्दा रगत देखिने
महिनावारी नभए पनि रगत देखिने
महिनावारी अनियमित हुनु
सेतो गन्हाउने पानी आउने
यौन सम्पर्क गर्दा दुख्ने समस्या
गुप्ताङ्गबाट असामान्य तथा अस्वाभाविक तरल पदार्थ बग्नु
क्यान्सरले एक चरण पार गरेपछि मात्र लक्षण देखिने हुँदा यसको नियमित जाँच पहिलो आवश्यकता हो। पाठेघर मुखको क्यान्सरको लाग्न लागेको आठ÷दस वर्ष अगाडिको सुरुको अवस्थामा निदान गरी उपचार गर्न सकियो भने यो क्यान्सर लाग्दैन ।
परीक्षणका अनेक विधि छन् । सबैभन्दा सहज विधि प्याप स्मेयर र भीआईए परीक्षण हो । त्यसैले समय समयमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सल्लाह बमोजिम विभिन्न जाँचहरु र स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहनुपर्छ ।
थप जानकारी भेरी अस्पतालमा कार्यरत प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.एलिश श्रेष्ठसँग गरिएको भिडियो कुराकानीमा हेर्नुहोस् ।
९ पुष २०७८, शुक्रबार प्रकाशित
उपचार व्यवस्थापनमा प्रहरी अस्पताल र मेडिकल कलेजबीच सम्झौता
कोहलपुर नगरपालिकाद्धारा निःशूल्क छाला रोग शिविर (फोटो फिचर)
नेपालगन्जमा फेरि कोरोना देखिन थाल्यो, ३ जनामा संक्रमण
डाक्टर गाउँमा जान नमान्दा स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेनः स्वास्थ्य मन्त्री खापुङ